खाना आशीर्वाद दिन प्रार्थना। ? [र भगवान को लागी खाना]
खानालाई आशिष् दिन प्रार्थना यो एक परम्परा हो जुन आज सम्म सबै परिवारमा मान्य छ।
यो बच्चाहरूको प्रशिक्षणको अंश हो र स्कूलमा पनि शिक्षणको रूपमा लागू गरिएको कुरा हो।
यो प्रार्थना गर्नुको महत्त्व कृतज्ञ हुनु, हामीले खानु पर्ने खानाको कदर गर्नु र नहुनेहरूका लागि सोध्नुमा हो।
यो ईश्वरलाई धन्यबाद दिने एउटा अभिव्यक्ति हो जसले हामीलाई काममा जान, खाना किन्नको लागि बल दिनुहुन्छ, हामीलाई तयार पार्ने बुद्धिमत्ता र परिवार बाँड्न आशिष् दिनुहुन्छ।
जहाँ टेबलमा परिवार छैन, हामी अझै पनि कृतज्ञ हुनुपर्दछ किनकि त्यहाँ खानाहरू नमिल्ने मानिसहरू छन्, जुन उनीहरूसँग छैन त्यसैले होईन, तर तिनीहरू स्वास्थ्य कारण वा अन्य परिस्थितिहरूको लागि सक्दैनन् भने यसले हामीलाई कृतज्ञ महसुस गर्नुपर्दछ र एउटा। यो दर्शाउने इशाराहरु मध्ये एक खान अघि थोरै प्रार्थना प्रार्थना गर्नु हो।
1 खानालाई आशीर्वाद दिनको लागि प्रार्थना के यो बलियो छ?
1.1 खानालाई आशिष् दिन प्रार्थना
1.2 खानाको लागि धन्यवाद दिन प्रार्थना
1.3 खानाको प्रार्थना
2 के मैले सबै प्रार्थनाहरू गर्नुपर्छ?
खानालाई आशीर्वाद दिनको लागि प्रार्थना के यो बलियो छ?
सबै प्रार्थनाहरू शक्तिशाली हुन्छन् जबसम्म तिनीहरू आफ्नो शक्तिमा विश्वास गर्दै छन्।
आशिष्‌ खाना भनेको विश्वासको कार्य हो जसमा हामी धन्यवाद दिन्छौं तर खानेकुरा हाम्रो शरीरमा राम्रो पस्न, उत्पादन दिन पनि भन्छौं, ताकि तिनीहरू हाम्रो टेबुलमा नपर्न र हामीलाई पौष्टिक फाइदाहरू प्रदान गर्न सकून् जुन तिनीहरूलाई प्रत्येक ल्याउनुहोस्।
बदलेमा हामी खाँचोमा परेकाहरूलाई पनि सोध्न सक्छौं र उनीहरूको टेबुलमा खानेकुरा छैन, जसले केवल खाद्यान्नको सानो टुक्रा खान सक्छ, हामी उनीहरूलाई सोध्छौं जो आफ्ना बच्चाहरूलाई दिन छैनन्, भोकाएको छ र छैन यसलाई संतुष्ट गर्न संसाधनहरू।
खाना र खानालाई आशिष् दिन प्रार्थना बलियो छ किनकि त्यहाँ विश्वास छ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुनेछ, यो खानाको लागि धन्यवाद मात्र दिने होइन, यो विश्वास र प्रेमको कार्य हो जहाँ हामीले आफूलाई अरूको ठाउँमा राख्छौं र तिनीहरूको आवश्यकताको लागि सोध्छौं।
जब प्रार्थनाले अर्काको आवश्यकता बारे सचेत गराइन्छ र हामी आफ्नो समानको लागि सोध्छौं हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रेम प्रदर्शन गरिरहेका हुन्छौं।
प्रभु भगवान; मिडिया यस तालिका मा पाहुनाहरु बीच एक भित्री विनिमय छ कि;
तपाईंले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको खानाको लागि वकालत गर्नुहोस् आज मात्र नाफाको लागि;
जो अहिले सम्म खाएको छैन ऊ आफ्नो सुन्दर सिर्जनाको फल प्रयोग गरीदिनुहोस्।
हामी तपाईंलाई भगवान पितालाई माया गर्दछौं, र हामी तपाईंलाई असीमित रूपमा धन्यवाद दिन्छौं जुन आज तपाईले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको साझा गर्नुभएकोमा।
हामी प्रार्थनालाई शुरु गर्न सक्छौं जुन अवसरले परमेश्वरलाई हामीलाई राम्रोसँग खुवाउन सक्षम तुल्याउने अवसरलाई धन्यवाद दिन्छ।
त्यसोभए हामी त्यस व्यक्तिलाई सोध्न सक्छौं जसले खाना तयार गर्न समस्या लिएका छन जसमा हामी यसलाई खान्न सक्छौं, जसले सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गरेका थिए जसको लागि यी खानाहरू हाम्रो टेबुलसम्म पुग्छन्।
हामीसँग नभएकाहरूसँग सोध्छौं र दैनिक रोटी हरेक व्यक्तिको हातमा राख्नको लागि सोध्छौं र अन्तमा हामी जीवनको चमत्कारलाई फेरि धन्यवाद दिन्छौं।
खानाको लागि धन्यवाद दिन प्रार्थना
पवित्र बुबा; आज हामी तपाईंलाई सोध्छौं
तपाईं यस टेबलमा हामीसँग सामेल हुनुहोस् र रोटीलाई आशिष् दिनुहोस् जुन हामी एक क्षणमा चाख्नेछौं; यसको मतलब यो हो कि यी हाम्रो स्वास्थ्यको फल हुन् र अब जसलाई टोकाउन संघर्ष गरिरहेको छ त्यसलाई नत्याग्नुहोस्।
हे प्रभु, हामी तपाईको प्रशंसा गर्छौं, र हाम्रो अनुग्रह छोटो छ हामी यी खाद्य पदार्थहरूको लागि कती भाग्यशाली छौं!
हामीलाई तपाईंको प्रेम बताउनुहोस् र तपाईंको कोठामा जानको लागि उज्यालो बनाउनुहोस्।
कृतज्ञता एक सद्गुण हो जुन आज थोरैले प्रदर्शन गर्दछन्, हामी यस्तो संसारमा बाँचिरहेका छौं जुन उच्च गतिमा गइरहेको छ र धन्यवाद दिन धेरै थोरै रोकिन्छन्।
परमेश्वरको वचनमा एउटा कथा छ जसमा केही कुष्ठरोगीहरूको कथा बताइएको छ जसलाई येशूले निको पार्ने चमत्कार प्रदान गर्नुभयो र धन्यवाद दिन बाँकी एक जना मात्र रहे।
धेरै चोटि यो हाम्रो जीवनमा हुन्छ।
हामी केवल खानाको बारेमा ख्याल राख्छौं, आफूलाई खुवाउने बारेमा तर धन्यवाद दिनेको बारेमा होइन र यो त्यस्तो कुरा हो जुन हाम्रो जीवनमा आवाश्यक हुन्छ।
आज प्यारा बुबा, यस टेबलमा बस्ने सबैलाई आशीर्वाद दिनुहोस्।
उहाँले तयार खाना छ जो एक आशिष् दिनुहुन्छ; तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् जो यहाँ हुनुहुन्छ। आशीर्वाद दिनुहोस्, साथै, यी प्रत्येक खेती गरेको छ।
पवित्र बुबा! आज तपाईले हामीलाई दिनु भएको भविष्यको लागि, हामी हार्दिक आभारी छौं र तपाईले आज यस टेबुलमा राख्नु भएको रोटीको लागि उपासना र प्रशंसाको असीम कोमलतासहित हामी आभारी छौं।
खानाको लागि प्रार्थनाको उत्तम उदाहरण नासरतका उही येशूमा देखिन्छ जसले उनीहरूले खानु भएको भोजनको लागि धन्यवाद दिए।
त्यहाँ चमत्कारहरु को लागी एक को लागी छ प्रार्थना हामीसम्म पुग्न र दैनिक खानाको चमत्कार ती मध्ये एक हुन सक्छ।
प्रार्थनाको माध्यमबाट धन्यवाद दिन यति गाह्रो देखिन्छ कि हामीलाई चाहिने खाना खाने सुअवसर भनेको परमेश्वरप्रतिको विश्वास र प्रेम हो।
के मैले सबै प्रार्थनाहरू गर्नुपर्छ?
तपाईले एक पटक प्रार्थना गर्नु पर्छ खाना खानुहोस् प्रत्येक पटक खाना पछाडि एक पटक। तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको प्रत्येक खानामा फरक प्रार्थना गर्नु हो।
यो दिन प्रति दिन, हप्ता देखि हप्ता वा महिना देखि महिना फरक हुन सक्छ।
सधैं याद राख्नुहोस् कि महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वर हाम्रो प्रभुमा विश्वास राख्नु हो। विश्वास र विश्वास कुनै प्रार्थनाको आधार हो।